Izitovu zeBioethanol: izinto eziluncedo nezingalunganga | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 19/04/2022 12:00 | Ikhaya eliGreen
Ngokwengqiqo, igama elithi ikhaya limele indawo efudumeleyo yosapho, indawo apho siziva sikhululekile kwaye sikhuselekile. Ukufakwa kweziko, nokuba ngamaplanga okanye i-bioethanol, kusinika ukufudumala nokuhlaziyeka, okusivumela ukuba sibe nendawo yokuhlanganisana epholileyo nezolileyo. Ngokwesithethe, iziko bezitshisa iinkuni, kwaye ukuba nazo kuneengenelo nezingeloncedo. Zikhethwa ngenxa yobushushu ababonelela ngazo, nangona kunjalo eyona nto iphosakeleyo kukuba iinkuni ezivuthayo zivame ukuvelisa umsi kunye nothuthu, ezinokubangela ivumba elibi kunye nokungahambi kakuhle ekhaya. I izitovu zebioethanol Baneenzuzo ezahlukeneyo kunye neengozi zokuqwalaselwa.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba yeyiphi eyona nto iphambili kunye neengozi zezitovu ze-bioethanol.
2 Izitovu zeBioethanol
3 Ngaba izitovu zebioethanol zishushu?
4 Iinzuzo kunye neengozi zezitovu ze-bioethanol
5 Ngaba bakhuselekile?
Ezi zitovu ezisebenzisa i-bioethanol okanye i-ethanol njengamafutha. Ithathwa njengemveliso ye-ikholoji kuba ukutshiswa kwayo akungcolisi imo engqongileyo njengamafutha efosili. Ifunyenwe ngezinto zokusebenza ze umthombo ohlaziyekayo, ofana nombona, umoba, amazimba, iitapile kunye nengqolowa.
Inyaniso kukuba xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lwamafutha aqhelekileyo, akukho zifundo ezibonisa inzuzo yayo yamandla, ekubeni iindlela zangoku zokuvelisa i-bioethanol zifuna ubuninzi bamandla avela kumafutha e-fossil xa kuthelekiswa namandla afunyenwe kumafutha avelisiweyo.
Ayifuni nasiphi na isixhobo sokukhupha imiphunga yeoli, ngoko inokubekwa kuyo nayiphi na igumbi elingaphezu kwe-25 cubic metres, ngaloo ndlela kuqinisekisa ukungena komoya okuqhelekileyo. Naliphi na ikhaya lifuna umoya oqhelekileyo wemihla ngemihla, imizuzu eyi-10 yomoya omtsha ngosuku yanele.
Ukusebenza kwayo kulula. Yongeza ngokulula amafutha ukuya kuphawu olubonakaliswe ngumenzi. Isitshisi kufuneka sivalwe ngokupheleleyo kwaye sipholiswe phantsi, unakekele ukuba ungachithi isitya okanye uchithe i-bioethanol. Ungayenza ngefunnel kwaye ucoce ngelaphu ukuphepha ukuchitheka. Ukukhanyisa indawo yomlilo, vele usondele kwi-lighter okanye udibanise ngokucophelela, njengoko ukuchithwa okuncinci kuqhelekileyo.
Ingxaki yongcoliseko lwemekobume isenza ukuba sikhangele amafutha angenabungozi kangako kwisifudumezi sethu. Emveni kweminyaka I-bioethanol iye yaba sisibaso esidumileyo ezindlini. Ngoko ke, kunzima ukukhetha ukuba zeziphi izitofu ze-bioethanol ezingcono kakhulu, zinikwe iimodeli zazo ezininzi kwiimarike.
Xa ufuna ukuthenga isitofu se-bioethanol kufuneka ujonge iiparitha ezininzi eziza kugqiba umgangatho wemveliso. Eyokuqala kukusetyenziswa. Injongo jikelele yokuthenga ube nokufudumeza ngokwezoqoqosho kodwa ngaphandle kokulahlekelwa ngumgangatho. Iindleko zesitovu okanye iziko yinto ebalulekileyo ekufuneka iqwalaselwe. Ukusetyenziswa kwe-bioethanol kuxhomekeke kubukhulu besitofu, inani labatshisi kunye nokuvulwa komlilo.
Enye iparameter ekufuneka siyithathele ingqalelo ngamandla. Okukhona isiziko sinamandla, kokukhona sisisebenzisa ngakumbi isixhobo. Kungcono ukuba nokulinganisela okulungileyo phakathi kwamandla kunye nokusetyenziswa.
Ekugqibeleni, ulwazi olubalulekileyo lubukhulu. Inkulu imveliso ekuthethwa ngayo, kokukhona uya kudla. Oku kusenza ukuba sisuke kobu budlelwane phakathi kwamandla kunye nokusetyenziswa. Ngoko ke, kufuneka ukhethe isitovu esilingana nobukhulu begumbi esifuna ukulifudumeza.
Ngaba izitovu zebioethanol zishushu?
Iindawo zokucima umlilo zeBioethanol zibonelela ngohlobo lobushushu ngokuhambisa. Oku akukwazi nje ukufudumeza igumbi esikulo, kodwa kunokuhlengahlengiswa kwamanye amagumbi. Ayiqhelekanga ukusetyenziswa njengokufudumeza okuphambili.
Zenzelwe ukuba zibekwe kumagumbi apho sichitha ixesha elininzi. Ngokuxhomekeke kumandla kunye nobukhulu bazo baya kutshisa ngaphezulu okanye ngaphantsi. Amandla aqhelekileyo kwiifireplaces yi-2 KW. Ngala mandla sinokufudumeza igumbi elimalunga ne-20 square metres. Ngale ndlela, kuxhomekeke kubukhulu begumbi lethu, sinokwazi ukuba yimaphi amandla okuthenga.
Iinzuzo kunye neengozi zezitovu ze-bioethanol
Ukusetyenziswa kwezi zixhobo zineenzuzo kunye nokungalunganga kwazo.
Nazi izibonelelo zayo:
Zezendalo kwaye kulula ukuyifaka.
Abafuni ii-extractors okanye iityhubhu zokungenisa umoya.
Inqanaba labo lobushushu lifikeleleka ngokukhawuleza.
Bazisa uyilo olongezelelweyo ekhaya.
Zikhuselekile kwaye kulula ukuzicima.
Ixabiso lifikeleleka kakhulu.
Phakathi kokusilela kwayo sifumana:
Nangona ingakhuphi umsi okanye uthuthu, ikhupha ivumba elibonakalayo.
Ikhono lokufudumala lilinganiselwe. Inqanaba elaneleyo le-oksijini kufuneka libe khona ukuphepha ukugxila okuphezulu kwe-CO2.
Umgama omncinane omele ube nawo kwifanitshala yimitha enye.
Ngomba womlilo kunye nokufudumeza, umbuzo uhlala uvela malunga nokuba bakhuselekile. izitovu zebioethanol zikhuselekile, ekubeni ukucinywa kwayo kulula kakhulu. Ukongeza, iimodeli ezininzi zinezikhuseli zamadangatye ezisinceda ukuba singatshi ngengozi.
Umgangatho wayo wengozi ungaphantsi kakhulu kuneenkuni zesithethe, ekubeni kungekho zintlantsi okanye zikhuni ezitshayo. Ukuze isitovu sethu se-bioethanol sikhuseleke ngokupheleleyo, kufuneka sihloniphe umgama wokhuseleko wemitha enye.
I-Bioethanol kufuneka izaliswe kwakhona njengoko isetyenzisiwe. Kukho iintlobo ezahlukeneyo kunye neempawu ze-bioethanol. Ngokutsho umgangatho ophezulu onawo, kokukhona umthamo wokufudumeza uya kuba nawo, ngaphezu kokukhulula iphunga elincinane.
Ukusetyenziswa kwe-bioethanol kuxhomekeke ngokupheleleyo kumandla omlilo kunye nexesha lokukhanyisa. Itshimini nganye inomthamo wetanki ethile. Ngokuxhomekeke kwinto enokuyenza, ukutshisa kuya kuhlala ngaphezulu okanye ngaphantsi.
Enye yezinto ekufuneka ithathelwe ingqalelo xa usebenzisa i-bioethanol bubunzulu bomlilo kunye nomngxuma wokuphuma. Idla ngokutshisa phakathi kwe-0,20 kunye ne-0,60 ilitha ye-bioethanol ngeyure. Kunokuthiwa oku kukusetyenziswa okusemgangathweni, ngoko ke ilitha yepetroli sinokuba nelangatye kwinqanaba eliphakathi phakathi kwe-2 kunye ne-5 iiyure.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga neenzuzo kunye neengozi zezitofu ze-bioethanol.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Izitovu zeBioethanol